Waa maxay caqabadaha hortaagan guusha Jabhadda ONLF ? – Xeernews24
Waa maxay caqabadaha hortaagan guusha Jabhadda ONLF ?
22. November 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
Aduunyada aynu ku nool nahay maha mid ay ka dhamaato dhibta iyo dagaaladu,waana shay dabiici iyo sunne u ah sida Ilahay Quraankiisa ku sheegay iyo Axadiista nabiga oo markasta inoo cadaynaysa in uu Aduunku yahay Daarti Dhibatada.
Hadaba dhibatooyinkaasi iyo dagaladaasi ayaa inta badan waxa ay ka yimadan amma ay ka asaasmaan iska hor-imaatin iyo is-fahan waa dhinacyo badanleh oo ka dhex abuurma,Dawlado,Gobollo iyo Qabaa’il meel wada dagan,kuwaasi oo markasta cadalad daro kala tirsanaaya.
Iyada oo aduunka oo dhami la odhan karo waxa uu soo maray dagaladasi aadka u kala wada gadisan ,hadana wakhtigan xaadirka ah waxa aad mooda in wali dagaladaasi ay kusii baaqi yihiin badan koodii Qarada Afrika,oo aanay marnaba ka dhamaan.
Gobolka iminka loogu magac daray ,ismaamulka Somalida Ethopiya ,amma Kililka shanaad ,waxa uu ka mid ahaa dhulkii shanta Somalida ,waxaanu ahaa dhulkii uu gumaystahuu Ingiriisku ku wareejiyay dalka Ethopiya .
Inkastoo aanay warbaahinta ku badnayn ,hadana waxaa jira dagaalo aan sidaasi u waynayn oo had iyo jeer ka dhexeeya dawlada Ethopiya iyo Jabhada lagu magacaabo „Ogaden National Liberation Front“ (ONLF) amma sida ay dadka qaar u yaqanaan „Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya“ (JWXO)
Waxaa la asaasay Jabhadan tariikhdu markii ay ahayd 15/8/1984- taasi oo ay asaaseen xubno deegaan ahaan kasoo jeeda dhulkaasi Somalidu ay degto ,iyada oo dadka asasay dhamaan tood la odhan karo waxa ay kasoo jeedeen qabiilka Ogadeen,sida aad magaca ku aragto.
Tariikhdu markii ay ahayd , September 1998-kii waxaa hoggaankii iyo maamulkii jabhadda ONLF oo uu gudoomiye ka ahaa N/Hure Sh.Ibraahim Cabdalla Muxamed oo halganka jabhadda xilligii ugu adkaa soo maray ,waxa uu gudoomiyahii jabhada ku wareejiyay Adhmaral-Maxamed Cumar Cismaan oo ka mid ahaa sarakishii cidamadii Badda ee Somaliya ,kaasi oo ah ninka ilaa hada ku fadhiya gursiga gudoomiya nimada Jabhada.
Hadaba anigu kama waramaayo Jabhadani ma xaq ayay ku dagalamaysaa mise xaq-daro ,balse waxa aan doonayaa in rayigayga aan usoo gudbiyo dad waynaha Somaliyeed ,wax yabaha aan isleeyahay sabab ayay u noqon karaan in Jabhada ONLF muddo dhan 32 sano ay midho ka keeni waydo ,halganka hubaysan ee ay kula jirtay dawlada Ethopiya .
Hadaba waxyabahii ugu wawaynaa ee Jabhadan ku kalifay in ay bilawdo halganka hubaysan ayaa waxa ka mid ahaa , kadib markii ay Dawladii Somaliya ee majaraha u haysay Halgankii WSLF iyo Xukuumaddii Ethopiya uu Heshiis ku dhex maray Wadanka Jabuuti, iyada oo ku heshiiyey in ay dawlad waliba soo afjarto Jabhadaha hubaysan ee wadankeeda ka hawl gala , taasi oo ay laba dawladood u arkayeen in ay maslaxadoooda ay tahay, heshiis kaasi oo dhacay 1986-kii ,inkastoo heshiiskaasi uu jabhado badan sameeyay.
Hadaba tan iyo wakhtigaasi waxa ay jabhadu soo martay marxalado kala wada gadisan,waxa ay soo gashay dagaalo aad u badan oo la odhan karo ilaa hada wax midha dhal ah oo laga hayaa ma jiro.
Wixii ka horeeyay 1991 Jabhada ONLF waxay si qarsoodi ah hawl-galadeeda dagaal uga soo abaabuli jirtay Gudaha dalka Soomaaliya,balse markii ay burburtay dawladii Somaliya , waxay jabhaddu isugu biya shubatay in ay noqoto mid magac ahaan uun u jirta .
Intaa kaa dib Jabhaddu Waxa ay qabsatay shirwayne ay u dhan yihiin dhamaan dadkii iyo madaxdii tabacsanaa fikirka ONLF , shirkaas waxaa lagu qabtay Magaalada Garbo, shirkaasi wuxuu ahaa daah furkii ugu horeeyey ee siyaasadda ONLF ,shirkasi oo la odhan karo waxa uu ahaa mid go’amadii la isla qaatay ay ila hada caqabad ku yihiin ururka ,sida Magaca Ogadeeniya .Top of Form 2
Jabhada ONLF oo la odhan karo Magaca Ogadeeniya waxa uu ku noqday caqabaha ugu waawayn ee ka horyimi,una diiday in xataa dadkii Somaliyeed ee Dhulka intiisa badan degana in ay ka horyimadaan ,ayaa hadana waxaa nasiib daro kale ah , in Jabhada ONLF madaxdeeda iyo xubnaheeduba ay aaminsan yihiin in Jabhadu ay tahay mid soomali oo dhan u dhaxaysa.
Magacan Ogadeeniya asalkiisu waa uun Magaca qabiilka Ogadeen,waxa ay ku doodan dadka qaar ka mida tageerayasha jabhada ,in uu magacan Ogadeeniya uu bixiyay gumaystihii Ingiriisku ,balse waxa aad modaa in ay ilawsan yihiin in Ingiriisku uu yahay kii dhulkan Somalida wakhtigasi Ethopiya u gacan galiyay ,magaca wakhtigaasi la odhan jirayna uu ahaa RASEEF EERIYA.
Inkastoo aanay Somalidu aanay lahayd tariikh qoran oo la raad-raaco, hadana tariikh ahaan waxaa dhaabad inoo ah, oo wax badan laga dhex heli karaa ,Gabayada ,maahmahaa,heesaa iyo halku dhigyada dhaxal galka ah,ma jirto lamana helaayo xataa tariikhda dhaw meel magaca Ogadeeniya uu kaga jiro tariikhda Somalida.
Yaan loo qadanin in aan kasoo horjeedo amma aan dacayad ku furaayo reerka Ogadeen xaasha ,balse waxa aan iftiminayaa xaqna aan u leeyahay ,in ay qalad tahay ,in dhul ay Somali oo dhami ay wada leedahay in qolo gaari inta at tunka u ridato in ay Magaca ay doontana ay u bixiso.
Waxaa kaloo ka kamida dhibaatooyinka ugu waawayn ee ONLF haysata ,iyaga oo aan saxiib ku lahayn dawladaha la jaarka ah Ethopiya ,sababta oo ah dawladahaasi waxa ay rumaysan yihiin in markasta laga hortago waxkasta oo la isleeyahay waxa ay carqalad ku noqon karaan xasiloonida geeska Afrika ,taasi oo markii danbana keentay in sida dahabka loo ugaadhsado shakhsiyaadka lagu tuhmo in ay ka tirsan yihiin ururka ONLF,mararka qaarna laguba qaldamo dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
Jabhada onlf ma haysato dhul ku haboon oo ay kasoo dagaalami karto.,marka laga reebo in ay ku dhex dhuumaalaysato dhulka cidlada iyo kaymaha u badan ee ku yaala gobolka ay ka dagalamayso ee Somali, kaas oo ay marba ku fuliso weeraro „ku dhufoo ka dhaqaaq ah“.
Jabhada onlf uma suura gasho in markasta hesho hub iyo aalad tayo leh oo ay iskaga caabido ciidanka xooga waynleh ee Ethopiya ,waxa kaliya oo mararka qaar ay hubka ka heshaa waxa uu yahay dhul yawga an xasiloonayn ee ka mid ah Somaliya ,taasi oo ay dhici karto in ay mararka qaar kasoo iibsadaan hub tuugo ah.
Gudoomiyaha Jabhada onlf Maxamed Cumar Cusmaan waxa uu iminka talada Jabhada hayaa ku dhawaad dhawr iyo toban sano, taas lafteeda wax ay u arkaan dad badan oo ka mid ah tageerasha Jabhadu in Gudoomiyahu uu yahay nin aan jeclayn in uu xilka baneeyo si loo helo cedle oo arintan uga far-dhuudhuuban.
Been sheegi maye waxa aan in badan waraystay dad yaw kala gadisan ,dadkaasi marka aan sadax meelood u qaybiyo ,midkastana aan ka waraysto bal in uu war iyo wacaan ka hayo jabhada onlf waxa ay iigu jawabaan:-
Dadka dhalinyarada ah ee da’duudu u dhaxayso 18-30 jirku waxabay ku odhanayaan manan maqal jabhadaasi sheekhow.
Dadka da’dodu u dhaxayso 30-40 kuna waxa ay ku odhanayaan ,marmar ayaanu ka maqalna dawlad deeganka Somalida oo hadal haysa.
Dadka da’doodu u dhaxayso 40-70 kuna waxa ay hadal kugusoo gunanadayaan ,miyanay jabhadaasi wakhti hore Ethopiya la heshiin.
Hadaba anigu waxa aan is idhaahda mararka qaar,waar malaha aduunba moodaaya in meesha halgan ka socdee waa dhako kale ,oo madaxda iyo mamulka jabhaduba waxa ay ku faraxsan yihiin , dhaantada iyo is-lulka quruxda badan ee ay ciyaraan dhalinta jibaysan ee u dhashay gobolkaasi.
Guntii iyo gaba-gabadii ,ma laga yaaba in jabhada onlf iyada oo wakhti badani ka lumay,iyada oo dhimasho iyo dhawac badan yeelatay in ay heshiis nabadeed la qaadato dawlada Ethopiya,sida hadaba aad marar badan ku maqlayso warbahinta oo ka waramaysa ,in wada hadal uu u socdo Ethopiya iyo onlf,taaso waliba madaxda onlf ay cadaynayaan in heshiisku uu ka socon la yahay Ethopiya.
Qolooyinka Taageera jabhadda ONLF iyo jabhaduba waxay aduunka ugu neceb yihiin Magaca Soomaaliland oo isna Ingriis baxshay!!!!!
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/11/onlf.jpg 158 319 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-11-22 11:05:572016-11-22 11:05:57Waa maxay caqabadaha hortaagan guusha Jabhadda ONLF ?
reer saylac iyo Lughaya oo Muqdisho Dhexdeeda Dil iyo cabudhin iskugu Hanja... Dawlada Britain Oo Ku Gacan Saydhay Hadal Ka Soo Yeeray Donald Trump